रामधुनी नगर : विकासका सम्भावना र चुनौती
स्थानीय - असार २२, २०७६, आइतबार, रामधुनी
देश संघीयतामा गइसकेको छ । यस अवस्थामा स्थानीय सरकारको अधिकार र उत्तरदायित्व धेरै छ । स्थानीय सरकारले चाहेमा धेरै काम गर्न सक्छन् । धेरै स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामहरु छन् । त्यस्तै सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाले पनि गर्नुपर्ने कामहरु धरै छन् । ति कामहरुमा सम्भावना र अवसरहरु हुँदाहुदै पनि चुनौतीहरु नआउलान भन्न सकिन्न । तर अनेकौं सम्भावना र चुनौतीका बीच महत्वपूर्ण काम गर्नु सबैको दायित्व हो । यसका लागि जनप्रतिनिधिहरुको जिम्मेवारी बढी हुने गर्छ । मैले चिनेको र बुझेको रामधुनी नगरपालिकामा विकासका प्रशस्तै सम्भावना र त्यतीकै चुनौती पनि छन् ।
विकासका सम्भावना :
रामधुनी नगरपालिकामा विकासको पहिलो सम्भावना भनेको पर्यटन हुन सक्छ । हाम्रो देश आफैंमा सुन्दर र पर्यटकयि दृष्टिकोणले ठूलो महत्व बोकेको देश हो । धार्मिक पर्यटनको हिसावले पनि हाम्रो देशको छुट्टै महत्व छ । त्यस्तै रामधुनी नगरपालिकामा अवस्थित रामधुनी मन्दिर धार्मिक पर्यटन विकासको दृष्टिकोणले ठूलो महत्व बोकेको मन्दिर हो । यो मन्दिर नेपालमा मात्र नभई भारतसम्म पनि निकै चर्चाको शिखरमा छ । प्रचारप्रसार र विकासमा सरकारी निकायले खासै चासो नराख्दा यो मन्दिर ओझेलमा परेको छ ।
हालका अधिकांश जनप्रतिनिधीहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि रामधुनी मन्दिरको विकास गर्ने, नगरलाई ऐतिहासिक धार्मिक नगर बनाउनेलगायतका आश्वासन बाँडेका थिए । तर निर्वाचित एको यतीका समयसम्म पनि रामधुनी मन्दिरलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने, धार्मिक तिर्थस्थालको रुपमा थप विकास गर्ने, देशविदेशमा प्रचारप्रसार गर्ने लगायतका काममा ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
रामधुनी नगर आफैंमा धार्मिक तिर्थस्थलको नामबाट बनेको छ । छिमेकी मुलुकहरुबाट भक्तजनहरु रामधुनी मन्दिर आउने गर्छन् । बराहक्षेत्र धाम, पिण्डेश्वर, कोसीटप्पु बन्यजन्तु आरक्ष जस्ता पर्यटकीय दृटिकोणले महत्व राखेका स्थलहरु पनि रामधुनीबाट नजिकै छन् । यी स्थलमा आएका पर्यटकलाई पनि रामधुनीमा जोड्न सकिन्छ । जसले पर्यटन विकासकमा टेवा पुग्छ । त्यसैले यो स्थलको माध्यबाट आन्तरिक र बाह्य पर्यटक रामधुनीमा भित्र्याउन सकिन्छ ।
त्यस्तै रामधुनी नगरभित्र अन्य पर्यटन विकासका सम्भावनहरु पनि छन् । आन्तरिक पर्यटन विकासका लागि शंकरबेली ताल छ । त्यहाँ मनोरम ताल र अनुपम प्राकृतिक दृष्य देख्न पाइन्छ । त्यस ठाउँलाई पिकनिक स्पोर्टका रुपमा विकास गरिदैछ । त्यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित र विकसित बनाउन उत्तिकै आवश्यक छ । उराठलाग्दो गर्मीमा कयौं स्थानीय अन्यत्र ठाउँमा गइरहेका छन् । वास्तवमै भन्ने हो भने रामधुनीवासी नै घुम्न, समय विताउन, गर्मी छल्न, वनभोजलगायतका कामका लागि अन्यत्र गइरहेका छन् ।
आफ्नै नगरभित्र समय व्यतित गर्ने ठाउँको विकास भइसकेको छैन । नगरभित्र ओझेलमा परेका अन्य विभिन्न ठाउँ छन् । त्यस्तै स्वीमिङ स्पोर्टको रुपमा वडा नं ५ मा रहेको डङग्राही पोखरीलाई विकास गर्न सकिन्छ । यदि यसका लागि स्थानीय सरकार र वडा कार्यलयले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्दै यस्ता पर्यटकीय स्थलको विकास गर्नसके पर्याप्त लाभ लिन सकिन्छ ।
रामधुनीका अधिकांश मानिस कृषि पेसामा आवद्ध छन् । ठूलाठूला उद्योग, कलकारखाना नभएका कारण यो क्षेत्रका प्राय धेरै मानिसले कृषि र पशुपालन पेसालाई अंगालेको पाइन्छ । यति धेरै मानिस कृषिमा आबद्ध भएको ठाउँमा कृषि र पशुपालन ब्यवसायमा सरकारले जोड दिनु आवश्यक छ । नगरका जुन ठाउँमा जे सम्भावना छ, त्यसलाई विकास गरी सोही ठाउँमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यहाँका किसानलाई अर्थोपार्जनका लागि मात्र भन्दा पनि व्यवसायिक कृषि र पशुपालनमा जुटाउनुपर्छ ।
व्यवसायिक रुपमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्दै विभिन्न जोनको रुपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । वनजङ्गल र घाँस उपलब्ध हुने ठाउँमा पशुपालन, पानीको पर्याप्ता भएको ठाउँमा माछा, धान धेरै उत्पादन गर्न सकिने ठाउँमा धान जोनको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । नगरले मूल्यांकन गरेर खेतियोग्य जमिनमा वस्ती निर्माणमा दुरुत्साहन गर्न सक्छ । एकिकृत सहरी विकासको योजनलाई ब्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाएर खेतियोग्य जमिनमा भइरहेको प्लटिङ र सहरीकरणलाई रोकिनुपर्छ ।
कृषकलाई समयमा मलविउ उपलब्ध गराउँने, व्यवसायिक कृषि र पशुपाल बिकासका लागि सहुलियत ब्याजमा बिभिन्न सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउने, वास्तविक किसानको पहिचान गरी राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा उपलब्ब गराउने काम यदि स्थानीय सरकारले गर्न सकेको खण्डमा नगर समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न सक्छ । त्यसै गरी नगरभित्रका प्रत्येक वडाका केही कृषकलाई हरेक वर्ष नगर तथा वडाले उत्कृष्ट कृषक घोषित गरी थप हौसला र उत्प्रेरणा प्रदान गरे कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकास हुन सक्छ । त्यसै गरी नगरले युवाहरुलाई पनि कृषिकर्ममा लाग्न प्रेरणा, सीपमुलक तालिम, सहुलियत ऋण तथा अनुदान दिएर विकासका योजना अघि बढाउन सक्छ ।
कमजोर शिक्षा क्षेत्र
रामधुनीका अधिकांश सामुदायिक विद्यालय कमजोर छन् । जनसेवा आधारभुत विद्यालयमा ५ जना शिक्षक र कर्मचारी छन्, तर १ जना पनि विद्यार्थी छैनन् । विद्यार्थी नभएकै कारण विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु पनि कामविहीन छन् । यो त एउटा प्रतिनिधि विद्यालय मात्र हो । धेरै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून छ ।
सरकारी मापदण्डलाई हेर्ने कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाइहुने विद्यालयमा जम्मा २०० जना विद्यार्थी हुनुपर्ने हो । त्यसमा पनि तराइको हकमा १ शिक्षक बराबर ५० जना विद्यार्थी हुनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तो कन्तबिजोक अवस्थामा रहेका विद्यालयलाई सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अथवा स्थानीयकै माग अनुसार मर्जर प्रक्रियामा पनि जान सकिन्छ । तर नगरपालिका भने मुकदर्शक बनिरहेको छ । गत वैशाखमा देशभर नै भर्ना अभियान चल्दा रामधुनी नगरपालिकामा के भयो स्थानीयलाई समेत थाहा छैन । धेरै स्थानीय तहले अभियानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर त्यही किसिमले कार्यक्रम गरे ।
उता निजि विद्यालयले अभिभावकसँग विभिन्न वहानामा चर्को मूल्य लिइरहेका छन् । कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा हेर्ने पूर्ण अधिकार पाएको स्थानीय सरकारसगँ कुन विद्यालयले कति मूल्य लिइरहेको छ भन्ने पनि कुनै तथ्यांक छैन । त्यस्तै रामधुनीबाट सञ्चालित एकमात्र क्याम्पसको रुपमा रहेको भादगाउँ सिनवारी क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । आवश्यक भौतिक संरचाना र शिक्षकहरु हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थी त्यहाँ जान मान्दैनन् । अहिले करिब ३५ विद्यार्थीले भर्ना गरेका छन् । दिनहँु इटहरीबाट आउने कलेज बसमा सायौंको संख्यामा विद्यार्थी बाहिरिँदा रामधुनीको शैक्षिक अवस्था र गुणस्तर स्पष्ट ।
स्थानीय सरकारले अनुमति बिनाका निजि विद्यालयलाई कारबाही गर्न नसक्ने र बारम्बार अनुगमनका नाममा भत्ता मात्र खाने र गाडीमा अनावश्यक इन्धन सक्ने काम गर्नुको कुनै औचित्य छैन । २ वर्ष देखि विद्यालयको अनुगमन गर्दै आएको भन्ने स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म अनुगनको प्रतिवेदनसम्म बाहिर ल्याउन सकेको छैन । आजसम्म कुनै विद्यालयलाई कारबाही गरेको पाइएको छैन । के हुन्छ अनुगमनमा ?, के पाइन्छ निश्कर्ष ? कुन विद्यालय वा कलेज कस्ता छन् ? कसैलाई अत्तोपत्तो हुँदैछ । यसरी शैक्षिक क्षेत्र भताभुङ्ग र लथालिङ्ग हुनु हामी सबैका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । यस्तो शिक्षा अवस्था हाम्रो लागि विकासको बाधक बन्न सक्छ ।
रामधुनीमा कति सुकुम्वासी छन् भन्ने एकिन तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि सुकुम्वासी नएका भने होइन् । विशेषगरी नहरको डिलमा छाप्रा बनाएर बसेका सुकुम्वासीको ब्यवस्थापन गर्न अब स्थानीय सरकार लाग्नुपर्ने दिन आइसकेको छ ।
सुनसरी–मोरङ सिचाइँ आयोजना अन्तर्गतको सिचाइ नहरमा कयांै भूमिहिनहरु बस्दै आएका छन् । त्यहाँ मात्र होइन अन्य कुनकुन ठाउँमा सुकुम्वासी र घरबारबिहिन छन् उनीहको छोराछोरीले राम्रो शिक्षादिक्षा र पोषणको सुविधा पनि पाउँन सकेका छैनन् । नगरपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासनका नारा लगाउँदै आए पनि सुकुम्वासीका छोराछोरीको समस्या समाधान बिना बालमैत्री शासन लागू गरिनु कागजको पुलिन्दा मात्र हो । यसरी सकुम्बासी समस्या नगरमा प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखापरेको छ ।
पहिला बजारमा भएका हरिया रुख उखेल्ने काम गरियो । तर केहि भएन । सीसीक्यामेरा जडान गरियो तर त्यो वालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । दिन प्रतिदिन झुम्का बजारमा हुने गरेका चोरी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । न त चोर पत्ता नै लाग्न सकेको छ ।
भएभरका रुख उखेलेर बजारभरी धुलो उडाउने काम गरिएको छ । धुलोकै कारण ब्यापारीहरुलाई समस्या भइरहेको उनीहरुको गुनासो छ । ब्यापार गर्ने वातावरण नभएको र स्थानीय सरकारले बजार व्यवस्थापनमा कुनै चासो नराखेको ब्यापारीहरुको गुनासो छ ।
त्यस्तै रामधुनीमा बढ्दै गएको अब्यवस्थित सहरीकरणका कारण बजार कंक्रिट बन्ने अवस्था छ । नगरले घरनक्सा पास र मापदण्ड विपरितका संरचना निर्माणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न नसक्दा भोलिका दिनमा विकास निर्माणमा ठूलो बाधा पुग्ने जानकारहरु बताउँछन् । यही अवस्थामा सहरीकरण हुँदै जाने हो भने भोलि विकासमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । जनप्रतिनिधि र सरकारले बेलैमा ध्यान नपु¥याउने तर एक्कासी विकासका नाममा भएका सबै भौतिक संरचना भत्काएर जनतालाई घरबारबिहिन बनाउने काम गर्नु जनप्रतिनिधिका ठूलो जनताप्रतिको धोका हो । यो विकासको चुनौतिको तत्व हो । यसबारे बेलैमा सोच्नु आवश्यक छ ।
पारदर्शिता र जावाफदेहितामा कमी
नेपालको संविधानमा नै जनताको मौलिकहरुको रुपमा सूचनाको हकलाई परिभाषित गरिएको छ । संविधानको मर्म र सरकारको नारालाई हेर्ने हो भने प्राय हरेक नेताहरुको भाषणमा पारदर्शिता र भ्रष्टाचार बिरुद्धको शुन्य सहनससिलतको कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
जनताले मागेका सूचनाहरु नगरले उपलब्ध गराउन नसक्नु दुःखद पक्ष हो । जनताको प्रत्यक्ष सरकोकारको विषय रहेका बिभिन्न क्षेत्रको बारेमा स्थानीय सरकारलाई थाहै छैन । कुन निजि विद्यालय कसरी चलिरहेका छन् ? कुन विद्यालयले अभिभावकहरु सँग कति शुल्क लिइरहेको छ ? कुनकुन विद्यालय अनुमतिबिना नै चलिरहेका छन् ? जस्ता समान्य कुराहरुको जवाफ जनतालाई दिन नसक्नु स्थानिय सरकारको लाचारीपना हो ।
स्थानीय सरकारको हकमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता भने खासै रहेको पाइँदैन । सार्वजनिक सुनुवाइमा नगरले खासै चासो देखाएको पाइँदैन । योजना छनोट र बजेट निर्माण प्रकृया देखि बजेट सार्वजनिकिकरणमा सामाजिक संघसस्था, राजनितिक दलका प्रमुख, सामाजिक अगुवा बुद्धिजिवि बर्ग र मिडियालाई बेवास्ता गरिरहेको छ । आफ्नो नगरको योजना छनोटको काम अघिल्लो वर्ष भेडेटारमा गएर बनाएको रामधुनीको सरकारले अहिले स्थानीय पार्टी प्यालेसमा ग¥र्यो तर त्यहाँ सम्बन्धित कसैलाई पनि नवोलाइकन आफूआफू मिलेर सुटुक्क गर्ने काम भयो ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जवाफदेहिता अनि जनताको अधिकारका नारा लगाउने जनप्रतिनिधि र स्थानिय सरकारबाट गरिएको यो प्रकारको ब्यवहारले दिगो बिकासलाई सम्भव भने बनाउदैन । उता रामधुनीका केहि सहकारीहरु आफुखसी ढङ्गले सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । करिब १० ओटा सहकारीले आफ्नो लेखा प्रतिवेदन नै बुझाउँदैनन् । तर पनि नगरले खासै कारबाही गरेको देखिएको छैन । यसरी जनतको करोडौ लगानि रहने सहकारी जस्तो सम्बेदनशिल क्षेत्रमा स्थानिय सरकारको उदासिनता छ ।
रामधुनी नगरपालिकाका मेयर जयप्रकास चौधरी नेपाली कांकसबाट प्रतिनिधित्व गरेका हुन् । रामधुनीका जम्मा ५१ ज्ना जनप्रनिधि मध्ये कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जम्मा १७ जना मात्र छन् भने बाँकी कम्युनिस्ट पार्टीका छन् ।
यसरी हेर्दा कम्युनिष्टको स्पष्ट बहुमत छ । मेयरले गरेका निर्णयमा अरु जनप्रनिधिले असहति राखेमो त्यो निर्णय लागु हुन गाह्रो हुन्छ । स्थानीय सरकारका प्रमुख नै अल्पमतमा परेका कारण पनि रामधुनीको विकासमा केहि बाधा पर्न सक्छ । त्यसमा पनि प्रदेश २ बाहेक केन्द्र र प्रदेश सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको नेत्तृत्वमा छ । माथिल्ला सरकारसँग फरक पार्टी भएकाले मेयरसँगको समन्वयको अभावका कारण कतिपय विकास र योजनामा सहकार्य गर्न कठिनाई उत्पन्न हुन सक्छ ।
काम गर्ने भन्दा पनि काम गरेको जस्तै गरेर फोटो खिच्ने अनि सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रचारमा बढी तल्लिन हुँने र खोक्रो लोकप्रियता कमाउँने प्रबृतिले जनप्रतिनिधिलाई निकै गाजेको आफ्ना कार्यकर्तालाई झोरो टार्न सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएका हावादारी प्रचारप्रसारले कहिल्यै पनि दिगो विकास हुँन सक्दैन । रामधुनीका जनप्रतिनिधिमा पनि प्रशस्त यो चरित्र हावी भएको पाइन्छ ।
स्पष्ट भिजनको अभाव
रामधुनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिमा स्पष्ट लक्ष्य तथा भिजनको कमी भएको जस्तो देखिन्छ । हुनत यो यहाँको मात्र समस्या छैन । कहिले यो गर्छु, त कहिले त्यो गर्छु । अन्तरवार्ताको क्रममा नगरमा पर्यटन विकास गर्ने भन्दै गर्दा नगरबाट बजेट कति छ भन्ने कुरा नै वडाध्यक्षहरुलाई थाहा हुन्न ।
हरेक कार्यक्रममा जनप्रतिनिधीहरुले आश्वासन बढी हुने किसिमले मन्तव्य र भाषण दिने गरेका छन् । नगर तथा वडावासीले आफ्ना ती आश्वसनलाई कुन रुपमा लिइरहेका छन् भन्ने जनप्रतिनिधिले खोज्ने बेला आएको छ । केबल यो जनता भुल्याउने मेलो मात्र हो । स्पष्ट भिजन र योजना बिना जनप्रतिनिधिले दिएका यस्ता तर्क र भाषणले आम जनतामा निरासा पैदा गर्ने गर्दछ । यस्ता हावादारी गफ विकासका बाधक तत्वमध्यको एक हो जस्तो लाग्छ ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यकर्ता रिझाउन गरिने प्रचारप्रसार अन्त्य गरिनुपर्छ । सम्भावना र अवसरलाई भरपुर उपयोग गर्दै बीचमा आइपरेका चुनौतीलाई पन्छाएर जनप्रनिधि र स्थानीय सरकार रामधुनी नगरको विकासमा अगाडि बढ्नुपर्दछ । पर्यटन, कृषि, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा विकास गर्न पर्याप्त सम्भावना छन् । जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना भिजन स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।
सामाजिक संघसंस्था, स्थानिय बुद्धिजिवि, सामाजिक अगुवा र मिडिया सँग सहकार्य गर्दै नगरका योजनाको दिगो विकासमा आधारित विकास निर्माणमा अगाडि बढ्नुपर्दछ । कुनै योजना र नीति बिना नै हचुवाको भरमा अगाडि बढ्नु भन्दा पनि स्पष्ट दृष्टिकोण, भिजन र लक्ष्यका साथ अल्पकालिन मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना जनताका माझमा ल्याउनु आवश्यक छ ।